Marco Valerio Marcial, yakakosha kirasi. Mamwe epigrams | Zvazvino Zvinyorwa
Marco Valerio Marcial, yakakosha kirasi. Mamwe epigrams
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhoroondo yezvinyorwa, Nhetembo
A Marcus Valerius Martial Ndine imwe yako kunzwira tsitsi. Gore rechipiri redhigirii rangu rekuyunivhesiti rakandikurudzira zvakanyanya, apo kunyangwe ndichifunda F. Inglesa, ini ndaive nako ChiLatin mumakosi maviri ekutanga neimwe ye ivo pfupa vadzidzisi izvo zvinoratidza hupenyu hwevadzidzi. Epigrams dzake dzaive pamusoro pekunetsa Aeneid ndiani akatamba gore rekutanga kana iyo Catilinaries yeCicero. Iye, Horacio naOvidio ndivo vadetembi vangu vandinodisisa. Nhasi Ini ndinosimbisa mamwe acho epigrams ndicho chaiva chisikwa chake chikuru.
1.0.2 Nzvimbo yekuvaka
Bilbilitan yekuzvarwa (iyo iripo Calatayud), rinenge gore 64 d. C. akaenda kuRoma kupedzisa zvidzidzo zvavo zvemutemo pasi pekuchengetedzwa kwe Seneca. Asi kudonha kubva munyasha uye kuzviuraya kwake kwakazomukwevera pasi. Aya ndiwo maratidziro aaiita akamanikidzwa kurarama nenzira yebhemiya semutengi wevashandi vakasiyana siyana. Asi mukudzoka aive aine iyo ushamwari yevanyori vakuru venguva iyoyo se Pliny Mudiki kana iyo zvakare satirical Juvenal.
Akawanawo kufarirwa namadzishe mukoma Titus naDomitian, kwaakakumikidza dzinoverengeka uye dzinofarira kurumbidza. Vakamutumidza zita nhengo yeacestrian order uye akahwina dzakasiyana siyana, pakati pavo kubvisirwa mutero uyo avo vasina vana vaifanira kubhadhara. Asi zvakafanana hazvina kuitika naNerva naTrajano uye ndaifanira kudzokera kuBílbilis. Ikoko akadzoka kuhupenyu hwekumaruwa, iyo yaive imwe yehope dzake huru uye kwaakatsaurira nziyo dzinoverengeka.
Basa raMarcial yakachengetedzwa zvisingaiti Sezvineiwo. With mabhuku gumi nemashanu endima, anokwana kuita mazana gumi nemashanu enhetembo dzechinyorwa chimwe chete, iyo epigram, maakange asina muvengi panguva yake.
Ini ndinosarudza mashoma pane hupenyu, kufa uye hushamwari, kuwedzera kune kumwe kushushikana, satire uye kushoropodzwa munharaunda kuwedzera kune vavengi kana kuda chinzvimbo. Uye ini ndinopedzisa neimwe yake elegies inonyanya kuzivikanwa.
Kugona kunakirwa nendangariro dzehupenyu kurarama kaviri.
Kana kubwinya kukauya mushure mekufa, ini handisi mukumhanya.
Nditende, hazvisi kuchenjera kuti 'ndichararama' mangwana anonoka: rarama nhasi.
Bhuku raunoverenga, Fidentino, nderangu; Asi kana iwe ukaverenga zvisizvo, zvinotanga kuve zvako.
Sei ndisingakutumire, Pontiliano, mabhuku angu madiki?
Kuti iwe, Pontiliano, usanditumire yako.
Kunyangwe iwe usingashambadze nhetembo dzako, unoshoropodza rangu, Lelio.
Zvimwe kurega kutsoropodza zvangu kana kutumira zvako.
Sevha kurumbidza kwako kune vakafa
Haumbokoshesa nyanduri mupenyu.
Pamusoroi, ini ndoda kuramba ndichirarama
kuti uve nerumbidzo yako.
Tais ine meno matema, Lecania chena sechando.
Ndechipi chikonzero? Uyu atenga zvimwe, izvo ndezvake.
Uyo anokudana kuti une huveve ari kunyepa, Zoilo.
Iwe hausi munhu anotyisa, Zoilo, asi zvakaipa pachako.
Usashamiswe nechinhu chero chipi chinoramba
kwekudya kwemazana matatu, Nestor:
Handidi zvekudya ndega.
Kusvikira nguva pfupi yadarika anga ari chiremba, ikozvino Diaulo murikugadzika;
zvaakaita as a undertaker anga akutoitawo saChiremba.
Kana muranda wako achikuvadza minga yake, iwe, Nevolo, dhongi rako rinorwadza.
Ini handisi svikiro, asi ndinoziva zvaunoita.
Iwe une minga yakakura semhino dzako,
kuitira kuti pese painopinda muchigadziko, unogona kunhuwidza.
Lesbia anopika kuti haasati ambobvisirwa mahara.
Ichokwadi. Paanoda kubatwa, anowanzobhadhara.
Kune iwe Fronton naFlacila, vabereki vake, musikana uyu ndinoisa,
Kuderera Kudiki, nakidzwa nemiromo yangu
uye zvandinofarira, kuitira kuti kutya kwerima dema kukunda
uye kune shaya dzinotyisa dzeTartarus hound.
Angadai akaona chando chanyungudika kubva muchando chake chechitanhatu,
iyo yaakararama nayo yakaenzana mazuva.
Izvo pakati pevadziviriri vanokudzwa vanotamba uye vanoneta nekusingaperi
uye utaure zita rangu nemiromo inokakama.
Shaggy huswa, usavhare mapfupa avo akapfava zvachose.
Pasi, usaremerwa: anga asiri wako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Marco Valerio Marcial, yakakosha kirasi. Mamwe epigrams
Nhetembo dzaMario Benedetti
Maitiro ekunyorera inoverengeka: iyo yekuverenga uye yekuverenga maitiro